“ခရစ်ယာန်ဘာသာ” တစ်ခုလုံးသည် ခိုင်မာသော အဆိုတစ်ရပ်အပေါ်၌အခြေပြုရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ၄င်းအဆိုပါ “ယေရှုခရစ်”သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်တော်မူ၍၊ ဘုရားနှင့် စပ်ဆိုင်သောဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် စီရင်ခွင့် ရှိသမျှတို့ကို ပိုင်သတော်မူသော အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာ၏ အရေးကြီးသောကဏ္ဍ The Importance of this lesson.
“ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်၊ အကျင့်စာရိတ္တနှင့်ဆိုင်သော လောကနီတိကျမ်း၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ ထားသောကျင့်ထုံးတစ်ရပ်မဟုတ်ပေ။ “အသက်ရှင်ခြင်း”နှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်သည်။ “ယေရှုခရစ်အား” မိမိတို့၏ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နှင့် အရှင်သခင်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့၏ အသက်တာ၌ ၀မ်းမြောက်စွာပိုင်ဆိုင်ထင်ရှားလျက်ရှိ “ယေရှုခရစ်”၏ အသက်ရှင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ “ယေရှုခရစ်၏ အမည်ကိုခရစ်ယာန်ဘာသာမှ ပယ်နှုတ်လိုက်ပါက၊ လုံးဝဥသုံ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့လျက်၊ အနှစ်သာရအားဖြင့် တန်ဘိုးမရှိ သောဗလာနတ္တိပင်ဖြစ်ပေသည်။ှ“ယေရှုခရစ်”၏ ဘုရားဇာတိ “ခရစ်တော်”သည် သာမန်အားဖြင့် လောကဓံတရား၏ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသော်၎င်း၊ ထူးခြားပြောင်မြောက်လှသော ဆရာတစ်ပါးသော်၎င်း မှားယွင်းစေသောအယောင် ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသော်၎င်း ဖြစ်ခဲ့လျှင် “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” တစ်ခုလုံး၏ အခြေခံတိုက်မြစ်သည် ကျိုးပဲ့ကြေမွလျှက် ပြိုကွဲပျက်စီးမည်ဖြစ်သည်။ “ခရစ်တော်”သည် ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားမဟုတ်၊ မစင်ကြယ်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှ တရားဝင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ မွေးဖွားလာသော ခလေးပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
“ခရစ်တော်”သည် ဘုရားနှင့် မစပ်ဆိုင်ပါက၊ သူပြုခဲ့သမျှသော အံ့သြဖွယ်ရာများသည်၊ ရှေးဟောင်းပုံပြင်များ သာဖြစ်ပေမည်။ သူ၏နုတ်ထွက်စကားများသည် မှားယွင်းချွတ်ချော်နေလျှင်၊ စင်္ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးနှင့် ဆိုင်သော လူသားများသည် မှားယွင်းနေလျှင် ၄င်းတို့၏ အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ဘယ်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းနိုင်မည် နည်း။
“ခရစ်တော်”သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မဟုတ်ပါက လစ်လပ်နေသော ဂူသင်္ချိုင်းတွင်းမှထွန်းတောက် လျက်ရှိသော ဘုန်းတော်ရောင်ခြည်များလည်း ထွက်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ အပြစ်တရား၊ သေခြင်းတရားနှင့် ငရဲကို လည်း အောင်နိုင်ကျော်လွှားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ခရစ်ယာန်တို့မျှော်လင့်တောင့်တလျက်ရှိသော ဘုန်းတော်ဝင်စားရ မည့်အနာဂတ်ကာလမှာလည်း၊ ပြိုကွဲပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် အပြစ်နွံထဲ၌ နစ်မြုပ်နေလျှက်၊ အခြား သောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍ ဆင်းရဲသောသူများဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ အသက်ထက်ဆုံး အရေးကြီးသော သတင်း စကားဖြစ်သည့်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် လွင့်စင်ကွယ်ပျောက်လျက်၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပေ မည်။ (၁ကော ၁၅း၁-၂၆ ကိုဆက်ပါ။)
“ခရစ်တော်ဘုရား ဇာတိကိုထင်ရှားစေသော သက်သေခံချက်များ”
Christ Deity is Attested To
(၁) ကိုယ်တိုင်သက်သေခံချက်များအားဖြင့် (By His Claims)
၁။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများက “ယေရှုခရစ်”အား - “မေရှိယ”အဖြစ် သက်သေခံထားခြင်း (ယော ၅း၃၉)
၂။ “အာဗြဟံ”မတိုင်မီရှိတော်မူ၍ “ငါဖြစ်သည်”အတိုင်း ငါဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
(ထွက် ၃း၁၃၊ ၁၄၊ ၆း၃) “ငါဖြစ်သည်”ဟူသော အမည်မှာ “ယေဟောဝါဘုရား” အတွက် ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ပင်ကိုယ်သဘောအားဖြင့် အလိုအလျောက်တည်ရှိနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ (ယော ၈း၅၇-၅၆)
၃။ “ယေရှုက ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏”ဟု (ယော ၆း၃၅၊ ၄၈)တွင် မြွက်ကြားခဲ့ပြီး၊ သူ့ကိုယုံကြည် သောသူအပေါင်းတို့သည် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ရမည်ဟု မှာကြားခဲ့သည်။
၄။ ယေရှုက “ငါသည်၊ သိုးဝင်သော တံခါးဝဖြစ်၏”ဟု (ယော ၁၀း၈)တွင် မိန့်ဆိုခဲ့ပြီး၊ ထိုတံခါးဝမှဝင် သောသူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်။ (ယော ၁၀း၉)
၅။ ယေရှုက “ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏”ဟူ၍ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (ယော ၈း၁၂၊ ၉း၅)
၆။ ယေရှုက “ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ ပြီး၊ သူ့ကိုအမှီမပြုလျှင်အဘယ်သူမှ ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်နိုင်ဟု မြွက်ကြားခဲ့သည်။ (ယော ၁၄း၆)
၇။ ယေရှုက “ငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏” ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ်ကင်းလွှတ်၍ သေလွန်သော်လည်း၊ ရှင်လိမ့်မည်”ဟု သက်သေခံထား ကြောင်း (ယော ၁၁း၂၅)တွင် တွေ့ရသည်။
၈။ ယေရှုက “ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတ၀တည်းဖြစ်သည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ယော ၁၀း၃၀-၃၃၊ ၁၄း၈၊၉)။
၉။ ယေရှုက “ဤကမ္ဘာမတည်ရှိမီ - ရှိနေကြောင်း “အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ (ယော ၁၇း၅)
၁။ အပြစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ (မဿး ၉း၂-၆) (မာကု ၂း၅-၇) (လု ၇း၄၇-၅၀)ကျမ်းပြုဆရာအချို့က “ယေရှု”အား လွန်ကျူးစွာ ပြောဆိုသည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်မှ တစ်ပါး အဘယ်သူမျှ အပြစ်ကိုမလွတ်နိုင်ကြောင်း နားလည်ထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ “ခရစ်တော်” သည် ဘုရားသခင် သို့တည်းမဟုတ် လွန်ကျူးစွာပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ပေမည်။
၂။ “ယေရှု”သည် ဘုရားသခင်မှတစ်ပါးအဘယ်သူမျှ မပြုနိုင်သော အံ့ဘွယ်ရာများကို ပြုခဲ့သည်။
(က) သေသောသူကို၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်စေသည့် (လူ ၇း၁၂-၁၅) (လု ၈း၅၂-၅၅) (ယော ၁၁း၄၁-၄၄)
(ခ) မျက်စိကန်းသောသူကိုမြင်စေသည်။ (ယော ၉း၎-၈)
(ဂ) ရေမှစပျစ်ရေသို့ အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ (ယော ၂း၇-၁၁)
(ဃ) လူ (၅၀၀၀)ငါးထောင်အား မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ကျွေးခဲ့သည်။ (မ၁၄း၁၅-၂၀)
(င) ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကင်းငြိမ်းစေခဲ့သည်။ (မ ၁၂း၁၀-၁၁) (လု ၆း၁၇-၁၉)
(စ) ပင်လယ်နှင့် လှိုင်းတံပိုးတို့ကို ငြိမ်သက်စေခဲ့သည်။ (လု ၈း၂၂-၂၄) (မ ၈း၂၃-၂၇)
၁။ “အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်” ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာများမှာ သုံးပါးတစ်ဆူ ဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ မပြောင်းလဲသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စီရင်ပိုင်ခွင့်တန်ခိုး အာဏာစက်တို့ပင်ဖြစ်သည်။
၂။ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များကို နှစ်မျိုးနှစ်စားပိုင်းခြားထားလျှက်ရှိသည်။
ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သောလက္ခဏများအားဖြင့် ဖွင့်ပြသော ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များ၊ ၄င်းတို့မှာ အလိုတော်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အကြွင်းမဲ့ရပ်တည်လျက်ရှိသော လက္ခဏာများ ပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းလက်ရာဖြစ်သော သတ္တဝါ အပေါင်းတို့အား ထင်ရှားစွာ ပြတော်မူသော ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာများ။
၃။ သဘာဝဂုဏ်အင်္ဂါရပ် (၉) မျိုးနှင့် လောကဓံတရားအားဖြင့် ထင်ရှားသော ဂုဏ်အင်္ဂါ (၉) မျိုးရှိပါသည်။
(က) သဘာဝဂုဏ်အင်္ဂါရပ် (၉) မျိုးမှာ အောက်ပါအချက်များနှင့် စပ်ဆိုင်သည်-
(၁) ဘုရားသခင်သက်တော်စဉ်(THE LIEE OF GOD) အသက်တာ(LIFE) ဝိဥာဉ်ရေးရာ (SPIRITUALITY) နှင့်မပြောင်းလဲခြင်း(IMMUTABLLITY)
(၂) ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူ သောဘုရား (THE PERSON OF GOD ) တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်း (UNITY) ထာဝရဖြစ်ခြင်း (ENTERNITY) နှင့်မပြောင်းလဲခြင်း (IMMUTABILITY )
(၃) ဘုရားသခင်၏အခွင့်တန်ခိုး ( THE POWER OF GOD ) အလုံးစုံသိခြင်း (OMNISCIENCE ) အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံခြင်း (OMNIPOTENCE )နှင့်ခပ်သိမ်းသော အရပ်တို့ ၌ရှိခြင်း (OMNIPRESENCE )
(ခ) လောကဓံတရားအား ဖြင့်ထင်ရှားသော ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များမှာ အောက်ပါအချက်များ နှင့် စပ် ဆိုင်သည်။
(၁) ဘုရားသခင်၏ သဘောသဘာဝ (THE NATURE OF GOD )
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (LOVE ) ကျေးဇူးတရား ( GRACE ) နှင့် ဂရုဏာတော် (MERCY )
(၂) ဘုရားသခင်၏ပင်ကိုယ် လက္ခဏာ (THE CHARACTER OF GOD )
သန့်ရှင်းခြင်း (HOLINESS) ဖြောင့်မတ်ခြင်း (RIGHTEOUSNESS ) နှင့် သစ္စာရှိခြင်း (FAITHFULNESS )
(၃) ဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးခြင်း (The Government of God) ဥာဏ်ပညာ (Wisdom) သမ္မာတရား (Truth) နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာစက် (Sovereignty)
မှတ်ချက် ။ ။ ရှေ့သင်ခန်းစာများတွင် ဤဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသော ဘုရားအကြောင်းကို လေ့လာရာ၌၊ အသေးစိတ် ဖော်ပြတင်ပြသွားပါမည်။ ဤသင်ခန်းစာ၌မူ “ယေရှုခရစ်”သည်၊ ဘုရားဖြစ်တော်မူ၍ ထာဝရဘုရားသခင်၏ဂုဏ်အင်္ဂါရပ် (၁၈)ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံကြောင်း ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့် ဖော်ပြလိုပေသည်။
(၄) သရုပ်ဖော်ပြချက် -
(က) “ခရစ်တော်”သည်၊ ထာဝရဖြစ်၏ (ယော ၁း၁-၃) ကောလောသဲ (၁း၁၇)၊ (ဟေဗြဲ ၁း၁၀-၁၂) (ဗျာ ၁၁း၈း၁၀)
(ခ) “ခရစ်တော်”သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ (ဟေဗြဲ ၁း၁၁-၁၂) (ဟေဗြဲ ၁၃း၈)
(ဂ) “ခရစ်တော်”သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိသော ဥာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၏။
* (မ ၉း၎) “သူတို့၏ စိတ်ကိုသိမြင်တော်မူမည်”
* (ယော၆း၆၄) မည်သူက သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံ၍၊ မည်သူကို
သစ္စာဖောက် မည်ကို သိတော်မူ၏။
* (ယော ၅း၂၂) တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှသည် သူ၌ အပ်ထား တော်မူ၏။
* (ဗျာ ၂၀း၁၁) အပြစ်သားအားလုံးကို တရားဆုံးဖြတ်မည်။
* (၁ကော ၄း၅) စိတ်နှလုံး အကြံအစည်များကို သိတော်မူ၏။
* (ကော ၂း၃) နက်နဲသောအရာ၌ ပညာဘဏ္ဍာ၊ ဥာဏ်ဘဏ္ဍာရှိသမျှကို ၀ှက်ထားတော်မူ၏။
(ဃ) “ခရစ်တော်”သည် အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၏။
* (ကော ၁း၁၆၊ ၁၇) “ခပ်သိမ်းသောသူတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍၊ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် တည်ကြ၏”
* (မ ၂၈း၁၈) “စီရင်ပိုင်ဆိုင်သောအခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှကို အပ်နှံခြင်းခံရ၏”
* (ဟေဗြဲ ၁း၃) “တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသော မိမိအမိန့်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်း သောအရာတို့ကို မစတော်မူ၏”
* (မ ၁၄း၁၉-၃၁) “ဖန်ဆင်းခြင်းတန်ခိုးအာနိသင်နှင့် ပြည့်စုံ၏။
* (လု ၈း၂၄) (မ၁၄း၂၆) “သဘာဝတရားတို့အပေါ်၌ လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးနိုင် ၏”
(င) “ခရစ်တော်”သည် ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌ရှိတော်မူ၏။
* (မ ၁၈း၂၀) “အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးစည်းဝေးလျက် ထိုအရပ်၌ ရှိ၏”
* (မ၂၈း၁၉-၂၀) “ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အစဉ် မပြတ်ရှိမည်။”
* (ယော ၃း၁၃) “မြေကြီးပေါ်မှာ အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိသကဲ့သို့ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ၏”
(စ) “ခရစ်တော်”သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို အစိုးရတော်မူ၏။
* (ယော ၅း၂၁၊၂၂) “အလိုရှိသမျှသောသူတို့ကို အသက်ရှင်စေ၏”
* (မသဲ ၂၈း၁၈) “စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှကို ပိုင်ဆိုင်၏”
* (ဖိ ၂း၁၀၊ ၁၁) “ယေရှုဘွဲ့နာမတော်ကိုခပ်သိမ်းသော သတ္တ၀ါအပေါင်း တို့သည်၊ ဒူးထောက်ရ၏”
(ရောမ ၁း၎) ကိုအထူးမှတ်သားပါ၊ ဤအကြောင်းအရာသည်အလွန်လေးနက်ကျယ်ပြန့်သဖြင့်၊ ရှေ့ဆက် လက်သင်ကြားပို့ချရမည့် သင်ခန်းစာတစ်ခုတွင် သီးခြားအကျယ်အ၀န်းရှင်းပြပါမည်။ ယခုသင်ခန်းစာတွင် “ယေရှုခရစ်”၏ ဘုရားဇာတိသည်၊ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း။ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်၍။ ရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခြင်းသည် ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာသတင်းစကား၏ “ထောင့်အမြစ်ကျောက်”ဖြစ်ကြောင်းသိရန်ဖြင့်လုံ လောက်ပေသည်။
စစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းမည်သည် “ဘုရားသခင်” တစ်ဦးတည်းအတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသော အရာဖြစ်၍ “ခရစ်တော်” အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ ပြတ်ဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်း၊ အမိန့်ပေးခြင်းအားဖြင့် “ဘုရား” ကဲ့သို့ဖြစ်စေသည် (သို့တည်းမဟုတ် ) ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထူးသိဒ္ဓိတင်ခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားခြင်း တည်းဟူသောကြီးမားသော အပြစ်ကျူးလွန်မူကိုသက်ရောက်စေသည်။
( မ ၁၄း၃၃ ) “လှေသားတို့သည်“ယေရူ”ထံပါးသို့ချဉ်းကပ်၍ညွှန်ပြလျှက်ကိုးကွယ်ကြသည်။”
(ယော ၂၀း၂၈) “သောမကလည်း အကျွန်ုပ်၏အရှင် အကျွန်ုပ်၏ဘုရား သခင်ပါတကားဟု လျှောက်၍ “ယေရူ” အား ကိုးကွယ်လေ၏။
(ဖိ ၂း၁၀၊၁၁ ) ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ သည်လည်း“ယေရူ”၏ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍ ကိုးကွယ်လေ၏။
“နိဂုံး” လေ့ကျင့်မှတ်သားပြီး “ယေရူ”၏ ဘုရားဇာတိ အကြောင်းကို လက်ဆင့်ကမ်း ဝေဌသက်သေခံပါ။
ဤသင်ခန်းစာတွင် အခြားသော အကြောင်းအရာများကို ထပ်ဆင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်သော်လည်း ကြည်ညို သော စိတ်နှလုံးဖြင့် သမ္မာတရားကိုစေ့စေ့ စပ်စပ်ရှာဖွေသူတို့အတွက် ဤမျှလောက်ဖြင့် လုံလောက်မူ ရှိ ကြောင်း အခိုင်အမာတင်ပြလိုပါသည်။
၁။ “ခရစ်တော်” သည် ဘုရားမဖြစ်လျှင် အဘယ်ကြောင့်ခရစ်ယာန် သာသနာသည်ရပ်တည်မူ မရှိဘဲကွယ် ပျောက်သွားမည်နည်း။
(ဤသင်ခန်းစာ အရေကြီးသောကဏ္ဍ အပိုင်းမှဖြေဆိုပါ။)
၂။ “ခရစ်တော်” သည်ဘုရားသခင်၏သားတော် မဖြစ်ခဲ့လျှင် မလွှဲမသွေဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကြောင်းအရာများ အနက်အနည်းဆုံး (၃) ခုကိုဖော်ပြပါ။
( “သင်ခန်းစာ အရေးကြီးသောကဏ္ဍ“ အောက်တွင်အဖြေများရှိသည်။)
၃။ “ခရစ်တော်” သည်ဘုရားဇာတိ သက်သေထင်ရှားစေသော “အချက်ကြီး (၅) ”ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
၄။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်း ထင်ရှားစေသည့် “ကိုယ်ပိုင်သက်သေခံချက်” အနည်းဆုံး (၄) ခုကိုဖော်ပြပါ။
၅။ “ခရစ်တော်”၏ဘုရားဇာတိကို သရုပ်ဖော်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကြီး (၅) ခုကိုဖော်ပြပါ။
၆။ “ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်” ၏အဓိပ္ပါယ် ကိုရှင်းပြပါ။
၇။ “ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များ”ကို နှစ်မျိုးနှစ်စားပိုင်းခြား သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၄င်းအမျိုးအစားနှစ်ရပ်ကိုဖော်ပြပြီး ၄င်းတို့အောက်၌ရှိသော လက္ခဏာ အင်္ဂါရပ်များအနက် တစ်မျိုးလျှင် (၅) ခုစီဖော်ပြပါ။
၈။ “ခရစ်တော်” ၏ဘုရားဇာတိကို ထင်ရှားစေသော “ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များအနက် လေးခုကို ကျမ်းကိုးနှင့်တကွ ဖော်ပြပါ။
၉။ ( ရောမ ၁း၎ ) ကိုလေ့ကျက်မှတ်သားပါ။ “ခရစ်တော်” ၏ဘုရားဇာတိကို အတည်ပြုခိုင်ခန့်စေသော “ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း” သည်အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
၁၀။ “ခရစ်တော်” သည် “ကိုးကွယ်ခြင်း” ကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်း သာဓက (၂၀)ခုကိုဖော်ပြပါ။
လူသားများအတွက် ကြွဆင်းလာသော ခရစ်တော်မွေးဖွားသောနေ့ကို ခရစ်စမတ်ဟု ခရစ်ယန်ပွဲတော်တစ်ခုအဖြစ် ရုံးပိတ်ကြသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ပွဲအဖြစ်ဆင်နွဲကြသည်။ စားသောက်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ဝေငှခြင်းအပြင် နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်း ဂီတပွဲများလည်း ကျင်းပကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာလိုပါလျင် အောက်ပါ လင့်ခ်မှ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ၃၆ခုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သက်ရောက်ပါစေ။
1. ယေရှုခရစ်၏ဘုရားဇာတိ The Deity of Jesus Christ
2. စာတန် (SATAN)
3. နတ်ဆိုး၊ ၀ိညာဉ်ဆိုးအကြောင်း Evil Spirit and Demon
4. အပြစ် Sin
5. ငရဲ Hell
6. ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်း Crist born from Virgin
7. ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင် Cross of Christ
8. သခင်ယေရှုခရစ် အသွေးတော်၏တန်ခိုး Power of Christ's Blood
9. ယေရှုခရစ်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း Resurrection
10. အသစ်မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာသြ၀ါဒ The New Birth
11. ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်း The way of salvation
12. ရွေးနှုတ်ခြင်း REDEMPTION
13. နောင်တ Repent, Sad, Regret
14. ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရား Law and Grace
15. ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရာ၌တည်စေခြင်း။ JUSTIFICATION AND SANCTIFICATION
16. ယုံကြည်သူ၏ ပကတိ (၂)မျိုး BELIEVER'S TWO NATURE
17. မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာ Blessing Hope
18. ယုံကြည်သူ၏ရပ်တည်ချက်နှင့်အခြေအနေ။ Believer's Faith and Actual Situation
19. ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆုလဒ် Salvation and Crown
20. မင်္ဂလာရှိသော ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု Blessing Assurance of Salvation
21. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် Holy Spirit Part 1
22. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် Holy Spirit Part 2
23. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် Holy Spirit Part 3
24. ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ပုံဆောင်ချက်များ Old Testaments Study
25. ဆုတောင်းခြင်း Prayers Definition Purpose and Power
26. ဗတ္တိဇံအကြောင်း Baptism
27. ကျမ်းစာအရ ယုံကြည်သူများသည် သီးသန့်ဖြစ်ခြင်း Bible Separation
28. အသင်းတော် Church
29. ခေတ်ကာလကြီးများကိုလေ့လာခြင်း Christian.Periods
30. ခေတ်ကာလအဆက်ဆက် ဘုရားအကြံအစည်
31. ခေတ်ကာလအဆက်ဆက် ဘုရားအကြံအစည်
32. နောက်ဆုံးသောကာလ Final Judgement
33. ကောင်းကင်ဘုံ Heaven
34. အသင်းတော်အားချီဆောင်ခြင်း The Rapture of The Church
35. ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်း Second Coming
36. ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးပါးတစ်ဆူ (တလုံးတ၀တည်း) ဘုရား Our Tribune God
ဆရာအောင်နိုင် Andrew ပြန်လည်ပြုစုသည်။ May-2013
မြန်မာပြည်တွင် စာပေးစာယူသင်တန်းစတင်ခဲ့သူအား မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုပါသည်။
Download Latest Rev2 PDF File (36 lessons - 3MB)
Click Here http://murann.com/text/bible.study/Lesson36.pdf